मनाइयो सोनाम ल्होछार - sailungonline
३० माघ २०७७, शुक्रबार २१:१४ । काठमाडाैं
तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम ल्होछार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएका छन् । आजदेखि नाम्युङ ल्हो (मुसा वर्ष) पूरा गरी लाङ ल्हो (गाई वर्ष) शुरु भएको हो । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम ल्होछार मनाइन्छ । मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन (मेघ), सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी १२ वर्गमा ल्होछारलाई विभाजन गरिएको छ ।
ल्होछारका १२ वटै वर्ष पशुपन्छीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृतिपूजक रहेको संस्कृतिविद् बताउँछन् । तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको वाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेष रुपमा मनाइन्छ । यसपर्वका अवसरमा सरकारले शुक्रबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
तामाङ जातिको मौलिक भेषभूषा, सांस्कृतिक गतिविधि, खानालगायत प्रदर्शनसमेत गरिने ल्होछारमा धेरै पर्यटक आकर्षित गराउन साताव्यापी रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष टुँडिखेलमा कुनै कार्यक्रम भएन ।
यस अवसरमा बौद्ध क्षेत्रमा तामाङ जातिको सांस्कृतिक भेषभूषा एवं पहिचानसहितको र्याली प्रदर्शन गरियो । बौद्ध स्तुपबाट शुरु भएको जोरपाटी टुसाल हुँदै पुनः बौद्धमै आएर समापन गरिएको थियो । कार्यक्रममा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिसहित यस क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको सहभागिता थियो ।
र्यालीपछि महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा ल्होछारको महत्वका विषयमा जानकारीसहित गीतसङ्गीत प्रस्तुत गरिएको समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान लामाले जानकारी दिए ।
यसैगरी राजधानीको स्वयम्भू क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी ल्होछार मनाइएको छ । यसैगरी देशका विभिन्न भागमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी पर्व मनाइयो । सोनाम ल्होछार महोत्सवका नाममा तामाङ खाना, भेषभूषा, कला संस्कृतिलगायतको प्रदर्शन भइरहेकोे छ ।
चुच्चेपाटीस्थित हायात चौरमा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित ल्होछार उत्सव आयोजना भएको छ । तामाङ बाहुल्यता रहेको बौद्ध, स्वयम्भूलगायत स्थानमा परम्परागत भेषभूषामा सजिएर युवा युवतीसमेत रमाइरहेको देखिन्छ ।
सिन्धुलीको घ्याङलेक गोपेमा ल्होछार सम्पन्न
ल्होछारमय बन्यो गुराँसे डाँडा
संखुवासभाका चैनपुर पनि सोनाम ल्होछार
‘भर्चुअल ल्होछार सांस्कृतिक समारोह’ सम्पन्न
लिसंखुपाखरले ल्होछारमा दुई दिन बिदा दिने
१. बागमतीमा यस वर्ष पनि ल्होछार महोत्सव हुने
२. मिस तामाङ ट्यालेन्ट शो सम्पन्न
३. नवौँ आदर्श एवं चौथो तारा स्मृति कप हुने
४. सरकार विचलित छैन : प्रवक्ता गुरुङ
५. चेपाङ समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा : नगरप्रमुख खनाल
६. ‘फटाहा फणिन्द्रे’ मा बुद्धि र रवि